Soomaaliya oo Caalamka la wadaagtay saamaynta dhaqaale ee uu gaarsiiyey Coronavirus. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Soomaaliya oo Caalamka la wadaagtay saamaynta dhaqaale ee uu gaarsiiyey Coronavirus.
Soomaaliya oo Caalamka la wadaagtay saamaynta dhaqaale ee uu gaarsiiyey Coronavirus.
Sii-hayaha wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle ayaa ka qayb-galay shir caalami ah oo ku aaddan saamaynta dhaqaale ee cudurka Covid-19 uu ku keenay dhaqaalaha caalamka, kaas oo ay qaban qaabisay Qaramada Midoobay, kaas oo aaladda internet-ka ee tooska ah ku qabsoomay.
Previous articleIs-maamulka Tigreega Itoobiya oo saaka u dareeraya doorasho.
Next articleDowladda Soomaaliya oo dhaqan galineysa xeerarka la dagaalanka musuq-maasuqa.